घरघेरा हालेर लोकप्रिय नेता ‘माइला लामा’ गिरफ्तार , कसको निर्देश थियो ?::देश र जनताप्रति समर्पित
घरघेरा हालेर लोकप्रिय नेता ‘माइला लामा’ गिरफ्तार , कसको निर्देश थियो ?
सरकार द्धारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चर्चित नेता तथा वरिष्ठ जनवादी कलाकार माइला लामालाइ मध्यरातमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । उपत्यका ब्यूरो इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका माइला लामालाई मध्य रातमा घर नै घेरा हालेर गिरफ्तार गरेको हो ।
लामालाइ उपत्यकाको काँडाघारीबाट रातको १२ : ३० बजे प्रहरीले अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पारेको नेकपाका स्रोतले जनाएको छ । नेता माइला सगै रहेका कार्यकर्ता रेशम तामाङ पनि गिरफ्तार परेका छन् । ‘लामा र तामाङ्गलाई ठुलो शक्ति लगाएर प्रहरीले गिरफ्तार गरेको बुझिएकोछ । नेकपाले यो सरकारको लज्जास्पद हर्कत र कायरतापूर्ण कार्य भन्दै भर्त्सर्ना गरेको छ ।’
बिगत केहि समय अगाडी देखी सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा “बादल”ले नेकपाका उपत्यका इञ्चार्ज माइला लामालाई पक्राउ गर्न आफैले निर्देशन दिएका थिए ।
माओवादी आन्दोलनको सास्कृतिक मोर्चाका लोकप्रिय नेता तथा तत्कालीन माओवादीको जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष थिए लामा । उनी जनयुद्धमा सास्कृतिक मोर्चामा रहेको भएता पनि विभिन्न कार्वाहीमा सहभागी बन्ने क्रममा आफ्ना अंगहरु गुमाएका छन । शान्ति प्रक्रिया सगै पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौ ५ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । यद्यपि निकै झिनो मतले पराजित भएका थिए । पार्टी विभाजनपछि वैद्य हुँदै विप्लव नेकपामा ब्युरो इन्चार्ज सम्म भएका उनि थुप्रैपटक हिरासतमा परिसकेका छ्न । हाल लामाले राजधानीको उपत्यकाको जिम्मेवारी लिएको जानकारी भएसँगै प्रहरीले उनलाई निशाना बनाएको थियो ।
प्रदेश १ मा सुरक्षा गोष्ठी विप्लव बारे बादलले यस्तो भने
‘विप्लव’ नेकपाको झापा जिल्ला कार्यालयमा प्रहरीको छापा
जनयुद्धका जिउदाे सहिद नेता लामा जेल चलान सर्वत्र बिराेध
अखिल क्रान्तिकारीका लुम्बिनी ब्युरो इञ्चार्ज विरेन्द्र विक सहित ३ जना पक्राउ
‘विप्लव’ नेकपाका बर्दिया इञ्चार्ज र क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पक्राउ
घाइते हातमा हत्कडी सहित अदालत पुगे लामा थुनछेक बहस सकियाे